Khasaarihii ka dhashay qaraxyadii Muqdisho - BBC News Somali
Khasaarihii ka dhashay qaraxyadii Muqdisho
Image caption Gaari gurmadka degdeg ah oo caawinaya dad ku dhaawacmay qarax hore oo ka dhacay Muqdisho
Inta la ogyahay sideed qof ayaa ku dhintay 11 kalena way ku dhaawacmeen weerar maanta galinkii hore ka dhacay degmada Shangani ee gobolka Banaadir, oo lala beegsaday dhismeyaal ay ku yaallaan labo kamid ah wasaaradaha Xukuumadda Soomaaliya.
Weerarka ayaa ku bilowday qarax gaadhi loo adeegsaday, rag hubaysan ayaana qaraxa kadib gudaha u galay dhismeyaasha. waxayna muddo raasaas iswaydaarsanayeen ciidamada ammaanka oo isla markiiba goobta gaaray, sheegayna in ay laayeen raggii weerarka gaystay.
Dadka weerarka ku dhintay ayaa isugu jiray kooxihii weerarka soo qaaday, ciidamada ammaanka iyo dad rayid ah oo ay kamid ahaayeen shaqaalihii wasaaradahaas.
Xildhibaan Saqar Ibraahim Cabdalla oo ahaa wasiir ku xigeenkii wasaaradda shaqaada iyo arrimaha bulshada ayaa kamid ahaa dadkii weerarka ku dhintay.
Xildhibaan Saqar ayaa golaha baarlamaanka kusoo biiray sanadkii 2016-kii waxaana lagasoo doortay magaalada Kismaayo. Wuxuuna kamid ahaa dhalinyarada wax kusoo baratay dalka Malaysia.
Dhismahayaasha weerarka lagu qaaday ayaa waxaa ka hawgali jiray wasaaradaha Howlaha Guud iyo Guriyeynta iyo tan Shaqada iyo arrimaha bulshada.
Ururka Alshabaab ee ka dagaallamaya Soomaaliya ayaa sheegtay masuuliyadda weerarka.
Horraantii bishaan, dad kor u dhaafaya labaatan qof ayaa ku dhintay weerar socday ku dhawaad 24 saacadood oo ka dhacay waddada Maka Al mukarramah.
Ururka Alshabaab ayaa kordhiyey weerarrada ay ka gaystaan qaybo kamid ah Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho, ayadoo ay jiraan weerarro dhanka cirka ah oo si isdaba joog ah loola beegsanayey goobaha ay Soomaaliya kaga sugan yihiin.